असोज २८ गते नयाँ राजा काे छनाेट हुने – Gorkha Sansar
यस्ताे रहेछ रहस्यः अाफ्नै श्रीमतीलाइ नदीमा बगाउनुकाे …………..
२५ थान सालको गोलिया सहित एक ट्याक्टर प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासकाे मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त
गोरखा अस्पतालमा उपचाररत ७८ बर्षका काेराेना संक्रमित पुरुषको मृत्यु
अाफ्नै श्रीमतीलाइ मर्स्याङदी नदीमा बगाउने एक जना प्रहरी नियन्त्रणमा
तनहुँकाे बन्दिपुर २ र ३ का ६० घर परिवारलाई राहत बितरण
कोरोना संक्रमित बोक्दै गाउँपालिका अध्यक्ष
पालुङटारकाे वडा नं. ५ र १० सिल, सिल प्रभावकारी नभएकाे स्थानीयकाे गुनासाे
असोज २८ गते नयाँ राजा काे छनाेट हुने
गोर्खा संसार २०७५, ९ आश्विन मंगलवार ०६:१२
गोरखाको ऐतिहासिक लिगलिगे राजा छान्ने दौड प्रतियोगिता यस वर्ष असोज २८ गते हुने भएको छ। गोरखाको इतिहास जगेर्ना गर्न बि स. २०६७ सालदेखि हरेक वर्ष बिजयादशमीको अवसर पारेर लिगलिगकोट विकास अभियान दौड प्रतियोगिता गर्दै आएको छ।
दौड प्रतियोगितामा सहभागीहरुले चेपे र मस्र्याङ्दीको दोभानबाट सुरु गरेर १३.८ किलोमिटर दूरी दौडेर लिगलिग कोटसम्म पुग्नुपर्नेछ । दौडमा जो पहिले लिगलिगकोटसम्म पुग्छ उसलाई नै लिगलिगे राजा घोषणा गरिंदै आएको छ। नवौं लिगलिगे दौड प्रतियोगिता संचालनको लागि आवश्यक तयारी तीव्र पारिएको लिगलिगकोट विकास अभियानका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाले जानकारी दिए ।
राजालाई श्रीपेचको साथमा साठी हजार एक सय रुपैयाँ
दौडमा पहिलो हुनेलाई राजा घोषणा गर्दै श्रीपेचको साथमा साठी हजार एक सय रुपैयाँ पगरी,मेडल र ट्रफी प्रदान गरिने रानाले जानकारी दिए। प्रतियोगितामा दोस्रो हुनेलाई नगद ३५ हजार एक सय, तेस्रो हुनेलाई २५ हजार एक सयका साथ मेडल,ट्रफी र प्रमाणपत्र दिइनेछ। चौथोलाई १२ हजार एक सय, पाचौं हुनेलाई ७ हजार एक सय, छैटौंलाई ५ हजार एक सय, सातौँ हुनेलाई ४ हजार एक सय, र आठौंलाई ३ हजार एक सय र नवौं २ हजार १ सय रुपैयाँ नगद पुरस्कारको साथमा मेडल, प्रमाण पत्र दिएर पुरष्कृत गरिने आयोजक समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाले जानकारी दिए ।
महिलाहरुको लागि वडडांडादेखि लिगलिगकोटसम्म ५ किलोमिटर खुला दौड प्रतियोगिता हुनेछ । प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले २० हजार, दोश्रो हुनेले १२ हजार ५, तेश्रो हुनेले ७ हजार ५ रुपैयाँ नगद पुरस्कारको साथमा मेडल, प्रमाण पत्र र ट्रफी पाउँनेछ।
लिगलिग बासीहरुको लागि चेपेघाटबाट नै शुरु हुनेगरी प्रतियोगिता राखिएको छ । जसमा प्रथम हुनेलाई २० हजार ५, दोश्रो हुनेलाई १२ हजार ५, तेश्रो हुनेलाई ७ हजार ५ र चौथोलाई ३ हजार ५ नगद सहित प्रमाणपत्र मेडल प्रदान गरिने रानाले जानकारी दिए । त्यस्तैगरि यस पटकदेखि आयोजकले बोहोरागाउँ देखि लिगलिगकोटसम्म १५ देखि १८ वर्षसम्मका छात्रा छात्राहरुको लागि पनि दौड प्रतियोगिता राखेको छ । सो दौडमा प्रथम हुनेलाई ५ हजार १ सय, दोश्रो हुनेलाई ३ हजार १ सय र तेश्रो हुनेलाई २ हजार १ सय नगदका साथ प्रमाणपत्र, मेडल र ट्रफी प्रदान गरिने रानाले जानकारी दिए ।
दौडमा सहभागी हुनको लागि बिदेशीले पाँच हजार, नेपाली नागरिकले एक हजार, लिगलिगबासी तथा महिलाको लागि पाँच सय रुपैयाँ र छात्र छात्रा (स्थानीय)ले निशुल्क नाम दर्ता गराउन सकिनेछ । नाम दर्ताको लागि अशोज १० गतेदेखि २५ गतेसम्मको लागि तोकिएको छ। दौड प्रतियोगिता अशोज २८ गते विहान ८ बजे चेपेघाटबाट शुरु हुनेछ ।
लिगलिगकोट र आसपासको क्षेत्रको संरक्षण र प्रर्वद्धनका लागि लोपहुने अवस्थामा पुगेको लिगलिगे दौडलाई निरन्तरता दिइएको अध्यक्ष रानाले बताए। दौडका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको लागि पर्यटन बोर्ड, पालुङ्टार नगरपालिका र अन्य बिभिन्न संघसंस्था, सहयोगीबाट संकलन गरिने अध्यक्ष रानाले जानकारी दिए ।
लिगलिगकोट गोरखा जिल्लाको साविकको आँपपिपल गाविस वडा नम्बर ४ हालको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर २ खोल्लीमा पर्दछ । ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्वको स्थान हो। लिगलिगकोट समुन्द्री सतहबाट करिब १,४३७ मिटर अर्थात ४,७९० फिट उचाईमा अवस्थित छ । गोरखा जिल्लाका ३९ वटाकोटहरुमध्ये लिगलिगकोट एक हो । लिगलिगकोट नेपाल एकिकरणको सुरूवातकर्ता मानिएका द्रव्य शाहको दरवार रहेको स्थान पनि हो । यहाँ आजभन्दा ४६० वर्ष पहिले बि.स.१६१५ सम्म दौड जित्ने मानिस एक बर्षको लागि राजा बन्ने परम्पराको रहेको थियो । बि सं १९१६ सालमा द्रब्यशाह राजा बनेपछि दौड प्रतियोगिता हुन छाडेको थियो । शाह वंशको अन्त्य पश्च्यात ४ सय ५२ वर्ष पछि २०६७ सालदेखि पुन: दौड प्रतियोगिता संचालन गर्न थालिएको हो ।
बन्द भएकाे अबधिकाे पढाइ जाडाे विदा, गर्मी विदामा हुने
२०७७, ४ बैशाख बिहीबार १२:३८
६ बर्षपछि हुम्डे विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा
२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार १६:१६
च्याङ्लीमा शिवरात्री मेला २०७५ अन्तर्गत भलिबल प्रतियोगिताको ३ खेल सम्पन्न, आज सेमीफाइनल र फाइनल खेल हुने
२०७५, १९ फाल्गुन आईतवार ०१:५३
पालुङटारमा ३ कराेडकाे स्वराेजगार काेष स्थापना : कस कसले पाउने ?
२०७६, २१ मंसिर शनिबार १३:२३
बस अनियन्त्रित भई सडकमा पल्टिदा सत्र जना घाइते, तीनको अवस्था गम्भीर
२०७५, १४ भाद्र बिहीबार १६:५२
नेपाली युवा क्षितिज रिमाल गुगल कम्पनीमा प्रविधि विज्ञको रुपमा नियुक्त
२०७५, १९ आश्विन शुक्रबार १३:१०
मुख्य समाचार 601
सूचना प्रबिधि 135